Mareykanka oo farriin adag u diray Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada - Awdinle Online
Dowladda Mareykanka ayaa Maadxweyne Farmaajo iyo Madaxda Maaamul goboleedyada waxaa ay ugu baaqday in ay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho nabdoon.
Qoraal kasoo baxay Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa si toos ah loogula hadlay Madaxweyne farmaajo iyo Madaxda maamul Goboleedka .
“waxaan ugu baaqaynaa Madaxweyne Farmaajo, Siciid Cabdulalahi Deni, Qoorqoor, Lafta-gareen, Cali Guudlaawe iyo Axmed madoobe in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku xaliyaan arrimaah la siku mari la’yahay, iyo tabashooyinka taagan, waana in dooarshadu ay ku dhacdaa si nabad ah oo wax qala-laase ah aysan dhicin, waxaana la aqbali doonin doorasho hal dhinac ah iyo doorashooyin is bar-bar socda” ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxay Safaaradda mareykanka ee Soomaaliya.
Qoraal saacad ka hor kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa lagu soo dhaweeyay magacaabidda Guddiyada Heer Dowlad Goboleed ee Hirgelinta Doorashada Jubaland iyo Puntland, waxaana si buuxda ay beesha Caalamku u taageertay soo jeedinta ah in si deg deg ah loo qabto kulan dhexmara madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah, si loo xalliyo arrimaha hirgelinta doorashada ee harsan si horey loogu socdo qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo loo wada dhanyahay.
Previous articleBeesha Caalamka oo taageertay Go’aan ay qaateen Puntland & Jubbaland
Next articleShirkii ay ku baaqeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo baaqday